Puntland oo hadashay mowqifka iyo waxa laga filan karo Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Puntland oo hadashay mowqifka iyo waxa laga filan karo Galmudug, Hirshabelle iyo...
Puntland oo hadashay mowqifka iyo waxa laga filan karo Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed
Wasiirka war faafinta dowlad gobaleedka Puntland Cabdulahi Cali Xirsi (TIMACAADE) ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamda madaxda dowladda dhexe, madaxda maamullada Jubbland iyo Puntland uga socda magaalada Muqdisho.
Timacadde ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dhamaan Madaxda Maamullada iyo Madaxda Dowlaadda Federaalka shir weyne ay is kugu yimaadan kaa oo looga wadahadli doono arrimaha misiiriga ah, doorashooyinka ay kamid yihiin iyo xal u helid muranka siyaasadeed.
Mar wax laga waydiiyay inay jiraan warar sheegaya in Madaxda HirShabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ka biyo diidayaan inay kasoo qeybgalaan shirka la qorsheynayo, wuxuu ku jawaabay in warkaasi uusan waxba ka ogeen, balse waa inay soo dhaweeyaan war-murtiyeedkii shirkii Deni iyo Axmed Madoobe ku yeesheen dhawaan magaaladda Garowe.
Kulankii Farmaajo, Deni iyo Axmed Madoobe ay yeesheen Sabtidii ayaa Wasiirka wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa mid loogu gogol-xaarayay Shirka loo dhan yahay, isagoo meesha ka saaray warar sheegaya in heshiis ay dhinacyada ku gaareen.
Puntland iyo Jubbaland ayaa horey u qaadacay natiijadda shirkii Dhuusamareeb 3, kaasoo laga soo saareey bishii lasoo dhaafay war murtiyeed lagu sheegay in heshiis doorasho la gaarey.
Arintaan ayaa ku soo aadaysa xil safaarada mareykanka ay soo saartay qoraalo isdaba jog ah oo keenay in Madaxweyne Farmaajo ogolaado shir loo dhan yahay inuu qabto